Daawo: Shir loogu jawaabay beelaha Hawiye oo maanta MUQDISHO ka dhacay - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Shir loogu jawaabay beelaha Hawiye oo maanta MUQDISHO ka dhacay
Daawo: Shir loogu jawaabay beelaha Hawiye oo maanta MUQDISHO ka dhacay
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay shir aaya-tashi ah oo ay isugu yimaadeen Ugaasyada, Odayaal dhaqameedka iyo Waxgaradka Dir, Digil iyo Mirifle iyo sidoo kale beelaha Shanaad, kaasi oo looga hadlayay xaalada dalka.
Shirka ayaa waxaa si gaar ah looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka oo maraya heer geba-gebo ah, kadib markii uu guddiga FEIT shalay dhaqan-geliyay jadwalkii dhaarinta xildhibaanada cusub.
War-saxaafadeed kasoo baxay shirkaas ayaa waxaa meesha looga saaray cabsida ku aadan in shirarka Dir, Digil iyo Mirifle uu dan gaar ka leeyahay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday, la iskagana hor keenayo qabiilada qaarkood.
“Maalmahaan waxa jiray hadalo ay beesha Hawiye la wadaagayeen saxaafada, kuwaasi oo ahaa in Beelaha Dir, Digil iyo Mirifle iyo beesha Hawiye uu dagaal dhexmari doono, dagaalkaasi oo uu abaabulayay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamadaay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo aan sal iyo raad toona laheyn,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay shirka.
Sidoo kale waxay cadeeyen in shirarkooda uu ku saabsan yahay aaya-tashigooda gaarka ah, islamarkaana aysan meesha oolin dagaal kala dhaxeya beesha Hawiye.
“Dadkaan cid ma soo abaabulin oo ayaga ayaa dantooda iyo midda dalka isku xilqaamay. Waa waxba kama jiraan in aan abaabuleyno dagaal iyo hebel ka dambeeya oo soo dirsaday,” ayuu yiri Oday kamid ah Nabadoonada ka hadlay shirka.
Ugu dambeyntiina waxay sheegen inay u midoobeen danta umadda Soomaaliyeed oo aysan jirin cid si gaar ah u taageersan yihiin ama u neceb yihiin, ayna ka shaqeynayaan Soomaaliya horumarkeeda.